(REDNECK) Uma unayo yonke nge-BASS, yenza umsindo! (okukhiqiziwe) - Ukubala kwe-NYE kwe-Djs, i-Vjs, i-nightclub 2019
SKU: I-DJ DROP 100 - #13 Isigaba: DJ Drops
(REDNECK) Uma unayo yonke nge-BASS, yenza umsindo! (okukhiqiziwe)
Uma ungokwakho konke lokho, yenza umsindo! (okukhiqiziwe)
Uma isinqumo sakho sonyaka omusha sokulahlekelwa isisindo. Isikhathi sokuqala. Nansi umxube wakho wokusebenza wokuNyaka omusha we-New Year !! (okukhiqiziwe)